သာရုံတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓါတ်ကူပစ္စည်းလမ်းများနှင့်မော်တော်ကားသမား၏ပုံစံသည်၎င်း၏ပြဿနာများနှင့်အတူရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကိုကျော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုသက်ပြင်းချရှူနိုင်ခဲ့ကြတယ်, အဖြစ်ချက်ချင်းမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်အခြားရှိ၏မနည်းလေးနက်ပြဿနာ။ ဒီအလိဗနာ ...
မည်သည့်ကားကိုပိုင်ရှင်အကျွမ်းတဝင်ဘက်ထရီပျက်ကွက်သောအခါအခြေအနေ။ စည်းကမ်းကြောင့်အများဆုံး inopportune ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်ပြီးအလွန်လေးနက်သောဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ။ မြို့ပြကိုဖျက်ထုတ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရင်ဆိုင်နေရပါလျှင် ...
ကမည်သို့ပင်, pickup အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်အမေရိက - သူတို့ရဲ့ဇာတိမြေ။ ကားတစ်စီးသမိုင်း banal စိတ်ကူးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ "Chevrolet ကား" Developers (ပစ်ကပ်ကဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ ...
"Lada Kalina" wagon နှင့် Hatchback: နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ။ "Lada Kalina 2" - မျိုးဆက်သစ်ကားတစ်စီး
2013 တွင်၊ AvtoVAZ သည်မော်တော်ကားသမားများအားကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်အားနှစ်သက်ခဲ့သည်။ "Lada Kalina 2" သည်မြင့်မားသောဆင်းသက်မှုနှင့်ကြီးမားသောအတွင်းပိုင်းနှင့်ရှေ့ဘီးကားတစ်စီးဖြစ်သည်။
ဒီတော့ကားတစ်စီး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကို 200000 အဘို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါ? တကယ်တော့ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏများအတွက်လက်တွေ့ရွေးချယ်စရာရုံမရှိ။ သူတို့ပြောသည့်အတိုင်း - တိုင်းအရသာနှင့်အရောင်အဘို့။ ဂျာမန်, ဂျပန်, ရုရှား, အမေရိကန် - မဆိုမျိုး ...
crane အပူပေးစက် VAZ-2114 ကားများ - ဒီအအေးစနစ်၏အနည်းဆုံးရမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကပြောင်းလဲပစ်ရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲ, ဒါကြောင့်မကြာခဏအရှိဆုံးကားပိုင်ရှင်, အတွေ့အကြုံရရှိကြောင်းဖြိုဖျက် ...
ဒီဇိုင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်တစ်ချိန်တည်းမှာနီးပါးတီထွင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုကိရိယာများဆငျ့ကဲသီးခြားနည်းလမ်းတွေခဲ့ကြပြီ။ အနည်းငယ်တစ်ကြိမ်, ဤဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြနိုင် ...
Off-road မော်တော်ယာဉ်များနှင့် crossover ကြီးမြတ်စွမ်းရည်နှင့်အတူကားများဖြစ်ကြသည်။ မြို့ထဲမှာရောလူနေအိမ်ခြေပြင်ပမှာပါ၊ သူတို့ဟာမင်းရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါ။ crossover (ကား) crossover ဆိုတာဘာလဲ - ဒါကအသစ်ပါ။
ဗြိတိသျှကုမ္ပဏီ JCB အရည်အသွေးမြင့်၎င်း၏ခြေရာခံများနှင့်ဘီးတပ်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဌန်အတွက်အထူးနေရာ backhoe Loader သိမ်းပိုက်။ ဒီ technique ကို၏အကျော်ကြားဆုံးမော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ ...
“ Lada Priora-2170” - ကားကိုပထမဆုံး Sedan တွင် 2007 တွင် AvtoVAZ မှထုတ်လုပ်သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ 2008 မှာ Hatchback ဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ 2009 မှာ wagon ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သတိပြုသင့်သည်မှာ ...
KamAZ-65115 အောက်တွင်ပေးထားသောထားတဲ့၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ, 1995 နှစ်ပေါင်းနှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထရပ်ကားများရောင်းချမှုအတွက် 1998 ဝငျသူတင်ချကျောမှာအရပျကိုယူပြီးသည်တစ်ဦးအမှတ်စဉ်အမှိုက်ပုံထရပ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ...
ယနေ့အထိ, မော်တော်ယာဉ်များ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေထဲကဆောင်သွားကြ၏။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံး - အတိတ်ကကားတစ်စီးဗီနိုင်းရုပ်ရှင်။ ဤသည်ပစ္စည်းအများအပြားထုတ်လုပ်သူများကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအကွာအဝေးညာဘက်ရွေးချယ်ရာတွင်ကြောင့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါတယ် ...
Patron Taker 250 မော်တော်ဆိုင်ကယ်သည်လှည့်စားတတ်သောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းသည်၎င်းသည်ဂျပန်လူမျိုးအချို့၏ပုံစံဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်စေသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွမ်းကျင်သူရော၊ ဆိုင်ကယ်ဝါသနာရှင်များပါချက်ချင်းပြောပါလိမ့်မယ်။
ရေနံပြောင်းလဲနေတဲ့သောအခါငါအင်ဂျင်ဆေးကြောဖို့လိုအပ်ပါသလား? အတော်များများက AUTOFORUM ပူဆွေးနွေးမှုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအမြင်များ၏အယူအဆကိုထောက်ခံအားပေးသူတို့အမြိုးမြိုးအတွက်ရရှိလာတဲ့, ညာတစ်ရာရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်းသေချာ ...
Lada Granta sedan: အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပိုင်ရှင်သုံးသပ်ချက်များ
"Lada Granta" (sedan ကား) - ပု Volga မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည့်ဘတ်ဂျက်ရှေ့ဘီး drive ကိုကားတစ်စီး၏နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်ဒယ် Lada Kalina အခြေခံအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2011 နှစ်တွင် Full-စကေးထုတ်လုပ်မှုစတင်များနှင့် ...
သူ့ကားအင်ဂျင်ဆီ, ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအသက်, ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အခြားအညွှန်းကိန်းကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုမေးခွန်းစိတ်ဝင်စားမဆိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့်အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော။ ဒါဟာရေနံ၏အသက်အဆုံးမှာသူကပြောပါတယ်အဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် ...
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမော်တာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်၏ပထမအဆင့်တွင်အဓိကအားဖြင့်အသွားအလာအခြေအနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ အချိန်နှင့်အတူသူ့ကားအချို့အင်္ဂါရပ်များနားလည်မှုလာပါတယ်။ လွတ်လပ်သောအဖြေရှာတဲ့ကားတစ်စီးပျက်တာတွေကတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ် (ရှိ၏ ...
သူတို့နှင့်အတူဆက်နွယ်ကားများနှင့်အရာအားလုံးကို၏လယ်ပြင်တွင်, စုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့်မော်တော်ယာဉ်၏ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအလေးချိန်အဖြစ်နှစ်ခုထိုကဲ့သို့သောအရာရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားအစဉ်အမြဲသီအိုရီလေ့လာမှုများအပေါ်စကားပြောရန်ပြီနှစ်ခုဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည် ...
ယာဉ်ပြတင်းပေါက်ခလုတ်အလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ပြီဆိုရင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤမော်တော်ယာဉ်ပေါ်စီးနင်းနေတဲ့အိပ်မက်ဆိုးသို့လှည့်နိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီအပူထဲမှာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်၏ချမ်းသောကာလ၌ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက် - ကရှင်းလင်းစွာဖွင့် ...
Chevrolet Niva၊ အခန်းစစ်ထုတ်ခြင်း - အစားထိုးခြင်း။ GM-AvtoVAZ မှထုတ်လုပ်သော Chevrolet Niva
Niva Chevrolet စက်သည်စက်ရုံမှပထမဆုံးသောတပ်ဆင်ထားသော AvtoVAZ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်ဒြပ်စင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ၎င်း၏စက်ပစ္စည်း၊ မျိုးကွဲများနှင့်အစားထိုးအကြောင်း - ပို ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,774 စက္ကန့်ကျော် Generate ။